Miinooyin laga soo saaray waddooyin kuyaala Jubada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Miinooyin laga soo saaray waddooyin kuyaala Jubada Hoose
Miinooyin laga soo saaray waddooyin kuyaala Jubada Hoose
Jubbaland (SNTV) Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa qaybo ka mid ah gobolka Jubada hoose ka sameeyey hawlgal miino saaris ah oo waxyaabaha qarxa looga nadiifinayo waddooyinka ay maleeshiyada Al-shabaab ku aaseen.
Deegaanka Qooqaani ee Gobalka Jubada Hoose ayaa ka mid ah meelaha laga saaray Miinooyinka, kuwaas oo kooxda xagjirka ah ay doonaysay inay shacabka iyo ciidamada ku waxyeelayso.
Horraantii todobaadkan ayaa hawlgal ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada hoose lagu dilay in ka badan 70-ka tirsan kooxda Al-shabaab, ka dib dagaal dhulka iyo duqayn cirka ah oo lagu qaaday.
Alshabaab ayaa soo food saartay cabsi iyo walal kadib markii ay sii xogeysteen howlgalada ka socda qeybo kamid ah gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya,gaar ahaan meelaha ay kaga dhuumaalaysanayaan deeganadaasi.
Previous articleXubin ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay Boliiska Kenya
Next articleku dhawaad 200 oo Tahriibayaal Soomaali ay kujirto oo lagu qabtay Turkey